Ciyaaraha - SHABAKADA HIIRAAN XOG
Kooxda Rael Madrid oo heshiis la gashay Golhayaha Kooxda As Roma
Hiiraan Xog, Jun 14, 2018:- Goolhayaha kooxda kubadda cagta AS Roma ee Alisson Becker ayaa heshiis lix sano ah la gaaray kooxda Real Madrid oo si aad ah loola xiriiriyay. Los Blancos ayaa inta ugu badan u muuqata mid kaga guuleysan karta saxiixa laacibkan kooxda Liverpool oo si aad ah loollanka ugu jirta. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaanan weli wax heshiis ah...
AKHRISO:- Soomaaliya ciyaartooy ugu dirtay Koobka Adduunka
Hiiraan Xog, Jun 9, 2018:- Xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya ayaa 3 ciyaartooy u direy dalka Ruushka, halkaas oo ay u daawasho tagayaan ciyaaraha, islamarkaasna qeyb ka noqonayaan ciyaartooy badan oo adduunka ka kala imaanayo. Guddoomiyaha xiriirka kubada cagta Cabdiqani Siciid ayaa sheegay in xiriirka kubbada cagta adduunka ee FIFA ay soo codsatay dhalinyarada “Dhalinyaro...
Xidiga Cristiano Ronaldo Oo Aanan Ku Faraxsaneyn Baacsiga Real Madrid Ee Neymar!
Hiiraan Xog, Jun 5, 2018:- Laacibka sare ee kooxda Real Madrid ayaa lagu soo warramayaa inuusan la dhacsanayan doonista ay Real Madrid dooneyso kooxda PSG Weeraryahankeeda Neymar Jr. Laacibka shanta mar ku guuleystay laacibnimada adduunka ayaa ka baqaya inuu damo shumiciisa garoonka Bernabeu, waxaana ay AS werrineysaa in 33-jirkan uu arko dalabaadka Los Blancos kuwa aanan...
AKHRISO:- Faalo laga qoray laacibka kooxda Liverpool Mohamed Salah
Hiiraan Xog, May 30, 2018:- Mohamed Salah Ghaly ayaa ku dhashay 15 June 1992 magaalada koonfur bari Masar ku taala ee Gharbia, waa ciyaaryahan kubada cagta ku xamaasha oo kasoo jeeda Masar una ciyaara kooxda Liverpool ee ka dhisan dalka Ingariiska. Salah ayaa kasoo bilaabay xirfadiisa kooxda ka dhisan magaaladii uu ku dhashay ee Mokawloon ka hor inta uusan ka dhaqaaqin...
Kooxda Arsenal oo fasaxday 5 Ciyaartoy oo muhiim ah
Hiiraan Xog, May 25, 2018:- Is badalka Arsene Wenger ayaa ah mida ugu hadal heynta badan dhamaadka xillic iyaareydkan horyaalka EPL, sidoo kalae waxaa loo magacaaway kooxda macalinka reer spain ee Unai Emery kaasoo dajinaya qaabka suuqa ay u wajihi lahaayeen. Xaqiiqdii waxa loo baahanyahay macalinkan cusub inuu u baahanyahay ciyaarayahano badna inuu ka takhaluso, waa ay...
Kooxda Arsenal oo loo magacaabay macalin cusub
Hiiraan Xog, May 24, 2018:- Unai Emry ayaa la isku raacay inuu kooxda Arsenal hogaamiyo kaddib markii agaamisaha guud ee kooxdaasi, Ivan Gazidis, uu xaqiijiyay inuu Emery noqonayo tababaraha cusub ee kooxdaasi maamuli doona. Emery, oo 46 jir ah, ayaa ku soo biiraya kooxda Gunners kaddib markii uu isaga tegay kooxda PSG ee waddanka Faransiiska taas oo uu u qaaday Horyaalka...
Özil oo ka jawaabay kulan uu la yeeshay madaxweyne Erdogan
Hiiraan Xog, May 20, 2018:- Labo ciyaartooy oo u dhashay dalka Jarmalka, balse asal ahaan kasoo jeeda dalka Turkiga Mesut Özil iyo Ilkay Gündogan ayaa la kulmay madaxda dalka Jarmalka si ay sharaxaad uga bixiyaan kulan ay la qaateen madaxweynaha Turkiga Racep Tayib Erdogan. Labada ciyaartooy ayaa la kulmay madaxweynaha Jarmalka Frank-Walter Steinmeier kadib markii siyaasiyiin...
Xagay ku dambeeyeen ciyaartoydii lagu waayay tartanka Barwaaqo Sooranka
Hiiraan Xog, May 18, 2018:- Bil ka badan ayaa laga joogaa tan iyo markii ciyaartoy badan lagu waayay ciyaarihii Barwaaqo Sooranka ee Australia lagu qabtay. Kuwii u horreeyay ee la waayay waxay ahaayeen siddeed ka ruux oo mid ahaa kooxdii ka socotay Cameroon. Sikastaba ha ahaatee waxaa hadda la qiyaasayaa in la la’yahay 20 ilaa 100. Waxaa ka mid ah ciyaartoy, tababareyaal...
Kooxda Tanzania oo ku guuleysatay Koobka Bariga iyo Bartamaha Afrika
Hiiraan Xog, Apr 29, 2018:- Waxaa soo idlaaday kulankii Final-ka ee ka socday dalka Burundi, halkaas oo ay ku wada ciyaarayeen xulkeenna Soomaaliya iyo Tanzania Tartanka Bariga iyo Bartamaha Afrika ee xiddigaha da’doodu ka hooseyso 17-ka sano. Xulka Tanzania ayaa ku guuleystay koobka kaddib markii uu 2-0 uga adkaaday xulkeenna Soomaaliya, kulan wiilasha xulkeenna uu...
Xulka Qaranka Soomaaliya oo gaaray finalka CECAFA
Hiiraan Xog, Apr 25, 2018:- Xulka qaranka Soomaaliya ee da’doodu ka yar tahay 17ka sano ayaa galabta u soo baxay cayaarta kama dambaysta ah ee koobka CECAFA U17 ee ka socda Burundi, ka dib markii ay 1-0 kaga badiyeen xulka Uganda oo ay Semifinalka wada ciyaareen. Xulka Soomaaliya ayaa goolka ay guushu ku raacday waxaa u dhaliyey daqiiqaddii 70aad ee qaybtii labaad...